Qalliinkii Madaxyada La Isku Beddelaayo – Ma suurto geli karaa ayay kula tahay? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa qalliin loo ballansanaa in la hirgeliyo 2015-kii, illaa 2017-kii, balse illaa haatan aan suurto gelin. Waxa qalliinkii ka cudur daartay ninkii lagu sameyn lahaa oo sababo isaga u gaar ah uga baaqday. Waana ninka taswiirta idiin ka muuqda oo ah Valerie Sprinidov, Ahna khabiir xagga koombiyuutarada ah, una dhashay waddanka Ruushka.
“The impossible of today, is the possible of tomorrow” ~ Bertrand Russel “Waxa maanta suurto geli waaya, berrito ayay suurtogaleyaan”
Hayaanka iyo haybinta la gobyaalayo aqoonta ku duugan kawnka iyo daah-ka-rogista asraarta uunka iyo aadanuhu waa mid weli socota, maalin kastana talaabo cusub ayaa hore loo qaadaa.!!
Muddo dhan 30 sanno ayuu ku fooganaa tabtii iyo tubtii loo hirgelin lahaa qalliinkan. Ugu dambeynna sannadii 2015-kii ayuu ku dhawaaqay in qalliinkani suurogal yahay. Qalliinka ayaa waxa loo kala qaybiyay laba qaybood oo kala ah: HEAVEN ” head anastomosis venture)” – iyo “( GEMINI subsequent spinal cord transplant)”– oo ah in maskaxda lasoo gooyay iyo xangullaha [=Spinal cord] qofka kale la isku tallaalo. Haddaba qalliinkan cajiibka ah; waxa (madaxiisa) si muttadawacnimo ah ugu deeqay, Valery Spiridonov,oo ah 31 jir u dhashay waddanka Ruushka, ahna khabiir dhinaca isgaadhsiinta iyo aaladda koombiyuutaradda ku xeeldheer (software programmer).
Waxa adduunka si weyn looga sugayaa qalliinkii abid ugu la yaabka badnaa ee taariikhda dunida ka dhaca – qalliinkaas oo la isku beddelayo madaxyada laba qof oo bini’aadam ah.
Dr. Sergio Canavaro, oo ah dhakhtar u dhashay waddanka Talyaaniga kuna takhasusay cilmiga qalliinka neerfayaasha iyo dareemayaasha jidhka ‘Neurosurgeon’ ayay kasoo maaxatay fikradda ah in qalliinkan lagu dhiirrado. Muddo dhan 30 sanno ayuu ku fooganaa tabtii iyo tubtii loo hirgelin lahaa qalliinkan.
Ugu dambeynna sannadii 2015-kii ayuu ku dhawaaqay in qalliinkani suurogal yahay. Qalliinka ayaa waxa loo kala qaybiyay laba qaybood oo kala ah: HEAVEN ” head anastomosis venture)” – iyo “( GEMINI subsequent spinal cord transplant)”– oo ah in maskaxda lasoo gooyay iyo xangullaha [=Spinal cord] qofka kale la isku tallaalo. Haddaba qalliinkan cajiibka ah; waxa (madaxiisa) si muttadawacnimo ah ugu deeqay, Valery Spiridonov,oo ah 31 jir u dhashay waddanka Ruushka, ahna khabiir dhinaca isgaadhsiinta iyo aaladda koombiyuutaradda ku xeeldheer (software programmer).
Velery Spiridinov, waa curyaan, waxa haleelay cudurka la yidhaahdo ‘Werdnig–Hoffmann disease (type I spinal muscular atrophy) – oo ah in qofku qaarka sare iyo qaarka danbe curyaan ka noqdo. Waana cudur halis oo la iska dhaxlo (inherited) badankana aan laga badbaadin, balse dhibanahani waa shakhsiyaadka fara-ku-tiriska ah ee ka samatabaxay cudurkan carruurnimadiisi.
Intaas kadib, haddaba madaxa Valery laga gooyo waxa lagu rakibi doonaa muwaadin ku nool Waddanka China – naf-hurahaas oo maskaxdiisa xanuun dilaa ahi ku dhuftay, sida (Brain dead cells) maadaama goobta lagu qaban doono qalliinkan loo badinayo in ay noqon doonta dalka China, inkastoo markii hore lagu waday in uu ka dhaco dalweynaha Mareykanka.
Maaha taariikhda markii ugu horraysay ee noole madaxiisa noole kale lagu beddelo. Waxay ahayd sannadii1908-dii markii Dr. Charles Claude Guthrie, isku beddelay madaxyada laba xayawaan oo ey ah eeyo ‘dogs. Kan oo keliyaatana, maaha qalliinada laga sameeyay madaxyada la isku beddelay, waxa dhacay qaar kale oo badan – kuwaas oo badhkoodna lagu guulaystay, qaarkoodna lagu fashilmay.!
Inkastoo Dr. Sergio cannavaro, ku adkaystay hirgelinta qalliinkan, sababtoo ah buu yidhi: “horumarka baaxad leh ee laga gaadhay tiknoolojiyadda sida: (diamond nanoblade) iyo (chiton-PEG glue) – oo ah qalabada loo isticmaali doono in lagu gooyo xubnaha, iyo sidoo kale ikhtiraacidda daawooyinka muquuniya difaaca jidhka (Immunosuppressant drugs).
Qalliinkan ayaa si weyn dunida looga dhawrayay dhicitaankiisa, in uu qabsoomo bisha septemper ee sannaddii 2017-kii, ase haatan weli ma dhicin.
Qalliinkii madaxyo la isku beddelayo. Akhriste qalliin noocan oo kale ah ma suurto geli karaa ayay kula tahay?
Tags: berrito ayay suurto galeyaan”Qalliinkii Madaxyo La Isku Beddelaayo - “Waxa maanta suurto geli waaya
Next post Disintegrated Somali Health Care System
Previous post Midibkaada Waa Quruxdaada!